Waxaa jira nooc diyaaradeed, habka loo dhejiyo arc iyo nooc gaar ah oo qaabeynta: shabaqyada derbiga birta ah ee daahyada ayaa ah muuqaal muuqaal ah, furan, badbaadinta booska, kulan fudud oo habboon. Waxay leedahay hawlo badan oo la isticmaalo iyo saamaynta qurxinta marka loo eego alaabta kale, waxayna aad ugu badan tahay shuruudaha ilaalinta deegaanka iyo badbaadada dabka.
Astaamaha sanwijka dhalada ah ee mesh qurxinta
1. Shabakadda qurxinta birta dhalada ah waa mid aan guban karin, xoog badan oo adag, iyo saameynta qurxinta ayaa muuqata.
2. Waxay si fiican u ilaalin kartaa dhismayaasha dhismaha.
3. Waxaad abuuri kartaa hal-abuur aan xadidnayn iyo raaxaysi farshaxan bilicsan meel kasta sida muuqaalka dhismaha, bannaanka gudaha, wejiga, saqafka, qurxinta asalka, qaybinta, daahyada gidaarka daahyada, iwm.
4. Sumcad, deeqsinimo, saameyn wanaagsan oo saddex-geesood ah, oo soo jiidasho leh hoosteeda iftiinka.
5. Rakibadu waa mid fudud oo degdeg ah
6. Mesh qurxinta birta ah waxay ka samaysan tahay birta 304 316 316L, oo ​​leh iska caabin heerkul sarreeya, iska caabin daxalka, ma fududa miridhku, qurux badan iyo heer sare.
7. Mesh-ku waa lebbis, oogada mesh-ku waa fidsan tahay, mesh birtuna waxay leedahay midabyo kala duwan. Waxaa loo habeyn karaa si xor ah oo dabacsan iyadoo loo eegayo shuruudaha
8. Dusha sare ee mesh birta waa sahlan tahay in la daryeelo, fududahay in la nadiifiyo, midab dhalaalaya, muuqaal gaar ah, sharaf iyo xarrago leh.
Hore: Saxan aluminium dalool ah oo loogu talagalay qurxinta gidaarka daahyada
Xiga: Mesh giraanta birta ah ee qurxinta ee gaashaanka silsiladda ilaalinta badbaadada
Mesh giraanta birta ah ee qurxinta leh ilaalinta badbaadada ch...
Soo bandhigida mesh giraanta birta ah Waxaa jira laba nooc oo isku xidhka silsilada ah: mesh giraanta alxanka leh iyo mesh giraanta aan alxan lahayn. Mesh giraanta alxanka leh waxay ku habboon tahay galoofyada goynta ka hortagga, maro goynta lidka ku ah iyo koofiyadda. Qaar ka mid ah faraantiyada walxaha khaaska ah ayaa loo adeegsadaa goobta milatariga waxayna leeyihiin hawlo difaac ah oo xabadu celiyaan. Shabakadda giraanta aan alxanka lahayn waxaa loo isticmaalaa daahyada saqafka, daahyada iyo kala qaybinta qolka, sababtoo ah shabagga giraanta aan alxanka lahayn ayaa ka raqiisan shabagga giraanta alxanka, laakiin waa ku adag tahay curtai...